Itinye ego na akụrụngwa na-acha akwụkwọ ndụ bụ isi ihe ga-eme ka ọ dị mma mgbanwe mgbanwe ihu igwe | Network Meteorology
Nature bu ndu. Otú ọ dị, mmadụ nke oge a yiri ka ọ na-anwa iwepụ ya na map ahụ, na-amaghị na ya onwe ya bụ nke ya. N'ezie, ọ bụ otu ihe gbara ọkpụrụkpụ nke ihe omimi dị na mbara ụwa anyị.
Mgbe ụfọdụ ndị na-eso ụzọ nkwenkwe ụwa ọhụrụ kpọrọ Gaia ma ọ bụ Nne Earthwa, nke bụ eziokwu bụ na anyị bi n'ụwa na-arịwanye elu. Ma, dị ka anyị si mara, omume ọ bụla nwere mmeghachi omume ya, n'oge na-adịghị anya. Ma ka na ihe niile enwekwara ohere maka ntụgharị uche na ọmụmụ ihe, na nke a, nke akụrụngwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe thelọ Ọrụ Environmental Hydraulics Institute nke Mahadum Camtabria na Biodiversity Foundation na-eme na ogige ntụrụndụ Spanish atọ: Picos de Europa, Guadarrama na Sierra Nevada. N’ebe ndị a magburu onwe ha kwalite otu oru ngo nke na-amu otu ataputa umu ahihia ndu na mweghachi oke ohia na-akwado mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe.
Otu n'ime ihe ha na-eme bụ ịnọdụ ala na ịgwa ndị njikwa nke ogige ndị ahụ iji kụziere ha ụdị ihe atụ ma hazie akụkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dabara adaba na mbara ala na ọnọdụ ihu igwe ya. Na mgbakwunye, ha ga-eleta nke ọ bụla n'ime ebe ndị a yana ndị njikwa, ndị isi na ndị ọrụ ntanetị iji gosi ha ụdị mgbanwe nke mkpuchi ahịhịa na mgbanwe ihu igwe, ihe ga-aba uru nke ukwuu, dịka ọmụmaatụ, iweghachi n'akụkụ mmiri ma ọ bụ mkpọda, ma ọ bụ iji kwalite ụfọdụ mpaghara oke ọhịa.
N'aka nke ọzọ, A ga-eme usoro nke imepụta ihu igwe iji chọpụta mmetụta nke mgbanwe nke ihu igwe ga-eme na 2050. Ya mere, ọ ga-ekwe omume ịmatakwu ma ọ bụ obere ihe ga - eme n'etiti etiti narị afọ ma ọ bụrụ na taa emeghị ihe ọ bụla iji kpuchido oke ọhịa, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na, n'ụzọ megidere, a na - eme ihe ka ha wee nwee ike ịkwado mgbanwe mgbanwe ihu igwe nke ọma.
N'ihe niile, ha nwere olile anya na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Spain na ụdị ndụ dị iche iche dị ebube nwere ike ịga n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Itinye ego na akụrụngwa akụrụngwa bụ isi ihe iji mee ka mgbanwe ihu igwe dị mma
Ndị eze atọ ahụ ga - esonyere oyi na mmiri ozuzo na Spain